एजेन्सी – मोरोक्कोका अचरफ हाकिमीले दुई गोल गरेपछि पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले फ्रेन्च लिग वानमा लगातार सातौ जित दर्ता गर्दा मेट्जलाई पराजित गरेको छ । पीएसजीले ९ खेलाडीमा समेटिएको घरेलु टोलीलाई २–१ ले पराजित गरेको हो । पीएसजीका लागि दुवै गोल हाकिमीले गर्दा घरेलु टोलीका किकि कोउएटले एक गोल फर्काए । मेट्जमा बुधबार राति […]
एम्बाप्पेले पीएसजी नै किन रोजे ?
८ जेठ, काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी)का फरवार्ड केलियन एम्बाप्पे थप तीन वर्षका लागि पीएसजीमा नै बस्ने निश्चित भएको छ । उनको अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हुनअघि पीएसजी र रियल मड्रिड दुवै क्लबले आआफ्नो दावी छाडेका थिएनन् । शुत्रबारमात्र उनकी आमा र एजेन्टले दुवै क्लबका अधिकारीसँग सम्झौताका सर्तबारे खुलेर कुरा गरेका थिए । दुवै क्लबले […]
पेरिस सेन्ट जर्मन (पीएसजी) ले फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा बराबरीमा रोकिएको छ । आइतबार राति भएको खेलमा पीएसजी ट्रोयससँग २–२ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाडेको हो । घरेलु मैदानमा खेलको छैटौं मिनेटमा मार्किन्होसले गोल गर्दै पीएसजीलाई अग्रता दिलाए ।नेयमारले पेनाल्टीमा २५ औं मिनेटमा गोल गर्दै पीएसजीलाई २–० को अग्रता दिलाए । ट्रोयसका लागि खेलको ३० औं मिनेटमा इके उग्बोले गोल गर्दै टिमलाई २–१ गोलको अवस्थमा ल्याए । फ्लोरिनले ४९ औं मिनेटमा गोल गर्दै ट्रोयसलाई २–२ गोलको बराबरीमा
पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा बराबरीमा रोकिएको छ । शुक्रबार राति भएको खेलमा पीएसजी घरेलु टोली स्टार्सवर्गसँग ३–३ गोलको बराबरीमा रोकियो । खेलमा सुरुवाती अग्रता स्टार्सवर्गले लिएको थियो ।स्टार्सवर्गका लागि केभिन गामिरोले तेस्रो मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । केलियन एमबाप्पेले २३ औं मिनेटमा गोल गर्दै पीएसजीलाई बराबरीमा ल्याए । ६४ औं मिनेटमा हाकिमी अच्राफले गोल गर्दै पीएसजीलाई २–१ को अग्रता दिलाए । ६८ औं मिनेटमा एमबाप्पेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पीएसजीला
पीएसजी उपाधितर्फ अग्रसर
५ वैशाख, काठमाडौं । फ्रेन्च लिग वानको शीर्ष स्थानको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले आइतबार राति दोस्रो स्थानको मार्सेलाई २-१ ले पराजित गरेको छ । यस जितपछि पीएसजी कीर्तिमानी १०औं लिग उपाधि नजिक पुगेको छ । घरेलु मैदान पार्क डे प्रिन्समा भएको खेलमा पीएसजीका लागि नेयमार र किलियन एमबाप्पेले गोल गरे । खेलको १२औं मिनेटमा […]
नेइमारको 'लफडा'ले आजित पीएसजी!
फ्रेन्च फुटबल क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)मा ब्राजिलियन स्ट्राइकर नेइमारका पछिल्ला केही दिन सकसपूर्ण रहे। पहिलो त च्याम्पियन्स लिगमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडसँग पराजित भएपछि पीएसजी लिगबाट नै बाहिरिएको छ। रियलसँगको हारसँगै नेइमार र गोलकिपर डोनरुम्मासँग ड्रेसिङ रुममा झगडा परेको चर्चा चलेको छ। यद्यपि नेइमारले डोनुरुम्मासँगको एउटा प्राइभेट ह्वाट्स एप च्याट सार्वजनिक गर्दै यो हल्ला…
हारबाट जोगियो पीएसजी
फ्रेन्च लिग फुटबल अन्तर्गत गए राति भएको खेलमा शीर्ष स्थानको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) हारबाट जोगिएको छ ।
Shilapatra मंसिर २०७८
पीएसजी र लाइपजिग भिड्दै
एजेन्सी, २ कात्तिक । च्याम्पियन्स लिगमा आज पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) र लाइपजिगबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पीएसजीको घरेलु मैदानमा (मंगलबार) आज राति १२ : ४५ बजे जर्मन क्लब लाइपजिगसँग भिड्ने भएको हो । पीएसजी भने आफ्नो दास्रो च्याम्पियन्स लिगको अपाधि अचाल्न ततपर रहेको छ । आज हुने खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)का फरवार्ड नेइमार चोटका […]
१९ असोज, काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मेनका केलियन एम्बाप्पेले रियल मड्रिड जाने भए मात्र आगामी समरमा क्लब छाड्ने बताएका छन् । उनले यो सिजनको शुरुमा नै पीएसजी छाड्न खोजेका थिए । यद्यपि पीएसजी र रियल मड्रिडबीच उनको ट्रान्सफरको सम्झौता हुन सकेन । रियलले अझै उनलाई अनुबन्ध गर्न चाहेको छ । एक अन्तर्वातामा बोल्दै उनले भने, ‘मैले […]
पीएसजी र म्यानचेस्टर एकै समूहमा
इस्तानबुल । अर्को सिजनको यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा युरोपेली फुटबलका दुई ठूला टोली फ्रान्सेली पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) र इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी एकै समूहमा परेका छन् । बिहीबार भएको नयाँ सिजनको च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणको ‘ड्र’ को समूह ‘ए’ मा पीएसजी र म्यानचेस्टर सिटीसँगै जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग र बेल्जियन क्लब ब्रुग रहेका […] The post पीएसजी र म्यानचेस्टर एकै समूहमा appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
३ जेठ काठमाडौं । फ्रेन्च लिग वानमा साविक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले रेइम्सलाई ४-० ले पराजित गरेको छ । यस जितपछि पीएसजी उपाधि होडमा कायमै छ । शीर्ष स्थानमो लिले भन्दा पीसजी एक अंकले मात्र पछि छ । लिले सेन्ट एटिएनेसंग गोलरहित बराबरीमा रोका पीएसजीलाई फाइदा पुगेको हो । गएराति घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पीएसजीलाई जिताउन […]